MyCurator: Curashada Mawduuca WordPress | Martech Zone
MyCurator: Curashada Mawduuca WordPress
Talaado, Agoosto 7, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kordhinta nuxurka waa noqoshada aqoonsi qalab muhiim ah si aad u siiso waxyaabo cusub oo ku saabsan bartaada, kor u qaadista taraafikada iyo la shaqeynta iyo ilaalinta bulshadaada. Adiga oo qoraya waxyaabaha aad ka kooban tahay, waad kala shaandheyn kartaa, qiimeyn kartaa oo aad falanqeyn kartaa waxyaabaha lagu daabacay webka oo aad uga faa'iideysan kartaa dhagaystayaashaada. Waxaan maalin walba ku daaweynaa waxyaabaha ku jira Martech - adiga oo kaa heleyna macluumaadka ugu habboon ee ku siin kara natiijooyinka dadaalka suuqgeyntaada.
MyCurator waa madal dhammaystiran oo nuxur leh oo leh akhriste akhristaha caqliga u gaarka ah ee barta inuu helo kaliya waxyaabaha aad rabto. Si dhakhso leh uga bogso qoraalka buuxa iyo dhammaan sawirada maqaalka saxda ah ee tifaftiraha WordPress ee loogu talagalay waxyaabaha cusub ee la cusbooneysiiyay. MyCurator waa madal dhammaystiran oo nuxur ah oo loogu talagalay blogyada WordPress. Waxay akhrinaysaa dhammaan digniinta, baloogyada, iyo quudinta wararka aad rabto inaad raacdo. Maqaal kasta oo laga helo MyCurator waxaa ku jira qoraalka buuxa iyo dhammaan sawirada iyo sidoo kale u tiirsanaanta bogga asalka ah, ee saxda ah tifaftiraha WordPress. Waxaad si sahal ah ugu soo jiidan kartaa xigashooyinka iyo sawirrada boostadaada xayeysiinta ah, adoo ku daraya fikradahaaga iyo faallooyinkaaga, si deg deg ah ugu abuuri kara waxyaabo cusub oo bogag ah.
Sida kaaliyaha shakhsi ahaaneed, MyCurator wuxuu adeegsadaa farsamooyinka barashada softiweerka sirdoonka farsamada si looga takhaluso 90% ama ka badan qodobbada ku jira quudintaada, digniinta iyo baloogyada, iyadoo diiradda la saarayo mowduucyada aad ku tababartay inaad raacdo. Tani saacado ayey kuu badbaadin kartaa maalin kasta. Waxay sidoo kale ku siineysaa waxyaabo la yaab leh oo ka kooban waxyaabaha la bartilmaameedsaday, ma ahan waxyaabo isku mid ah oo dadka kale oo dhan dib-u-tweet-gareeyaan.
Software-ka asal ahaan wuxuu ku bilaabmay goob marti-gelin u ah ganacsiyada, iyo WordPress plugin wali adeegsiga daruuraha ayuu u adeegsadaa howsha culus ee AI, taasoo culeyska ka saareysa bartaada. Waa kuwan muuqaalka guud sida ay u shaqeyso:
Nidaamku wuxuu adeegsadaa habka tababarka iyo habka daabacaadda labadaba. Qaabka tababarka, waad sii wadi kartaa inaad ka caawiso nidaamka horumarinta algorithms-ka falanqeynaya iyo shaandhaynta ilaha aad bixiso (iyada oo loo marayo ururintaada Links-ka WordPress). Markaad dareento in nidaamku aqoonsanayo waxyaabaha ku habboon, waad dejin kartaa inaad si toos ah ugu daabacdo waxyaabaha ku jira boggaaga WordPress.
Waxaa jira nooc bilaash ah iyo noocyada xiga ee la bixiyo (Ganacsiga iyo Ganacsiga) waxay leeyihiin xaddidaadyo tirada maqaallada la falanqeeyay - laakiin wali waa kuwo la awoodi karo.
Tags: maadooyinka la isku qurxiyoContent Suuqistiraatiijiyadda contentdardargelintamycuratorplugin WordPress
Sababaha Ay Dadku Uga Tagaan Gawaarida Dukaamaysiga
Ku Helida Dadkaaga Natiijooyinka Raadinta